Wasaaradda Caafimaadka Puntland Oo Dhaqaatiir u Dirtay Deegaanada Gobalka Sool Ee Aan Lahayn Isbitaalada (Dhageyso) – Goobjoog News
Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland ayaa Dhaqaatiir look ala qeybiyay Seddax Koox waxay u dirtay deegaanada gobalka Sool ee aan Isbitaaladu la hayan, taa oo qeyb ka ah balanqaad ay wasaaraddu horay u sameysay.
Magaalada Garoowe ee xarunta gobalka Nugaal waxaa ka dhacday munsaabad lagu sagoontiyay dhaqaatiirtaan, taa oo ay ka qeyb galeen xubno ka socda wasaaradda Caafimaadka Puntland iyo sidoo kale wakiilo ka socday Hay’adda UNFPA oo bixisay dhaqaalaha ku baxaya howshaan caafimaad.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland Dr Cabdirisaaq Xirsi Xasan wuxuu sheegay barnaamijkaan in uu qeyb ka yahay mashruuca dardar galinta adeega caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, kaas uu dhawaan xariga ka jaray madaxweynaha maamulka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali.
Waxaa sidoo kale halkasi ka hadlay Wasiirka caafimaadka maamulka Puntland, isaga oo sheegay in ay natiijo wanaagsan ka filanayaan kooxdaan dhaqaatiirta ah ee Markii ugu horeysay la diray, Bil walabana tano ay joogto ahaan doonto.
Waa markii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyay bur burka dowladii Dhexe dhaqaatiir loo diro deegaanada aan lahayn Isbitaalada, kana fog Laamiga ee ku yaala Puntland.